विवाहा एउटा समाजिक नैतिक बन्धनसंगै पवित्र संस्कार पनि..... - RanaTharu
विवाहा एउटा समाजिक नैतिक बन्धनसंगै पवित्र संस्कार पनि…..
धनगढी,१७ माघ ।
विवाहा एउटा समाजिक नैतिक बन्धनसंगै याे एउटा पवित्र संस्कार पनि हो । तर उमेर समुहका आधारमा कानुनले प्रतिवन्ध लगाएको छ ।
परिपक्व नभई हुने विवाहसँगै त्यसले निम्त्याएका शारीरिक जोखिम त छँदै छन् यसले सामाजिकरूपमा पनि असर पारिरहेको छ ।
अझै पनि अभिभावकमा उमेर नपुग्दै छोराछोरीको विवाह गर्नुहुन्न भन्ने मानसिकतामा परिवर्तन नआउँदा पनि बालविवाहको दरलाई शून्यमा पुर्‍याउन सकिएको छैन
दुई परिवारको सहमतिमा हुने बालविवाह कानूनले नियन्त्रण गर्न नसकिने भएकाले अभिभावकमा नै जागरण ल्याउनुपर्ने खाँचो रहेको छ ।
अधिवक्ता कृष्ण प्रशाद सुवेदी
बीस वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गरेमा यसलाई नेपालको कानूनले बालविवाह भन्ने गरेको छ । गाउँमा बालविवाह बढ्दै गएको छ । बालविवाह रोकथामका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाले काम गरिरहेका छन् । बालविवाह केही मात्रामा न्यूनीकरण भए तापनि पूर्णरुपमा रोकिन भने सकेको छैन ।
उमेर नपुगी विवाहा गर्दा विवाहीत जोडीको शारीरिक , मानसीक , आर्थिक , अपरिपक्क अवस्थाले गर्दा विवाहित जोडिबाट जन्मने बच्चाको पालन पोष्णको समस्या नवजात शिशुको शारीरीक विकास नहुने हुदा कानुनले नै निश्चीत उमेर विवाहाको लागि तोकि दिएको छ ।
मुलुकि देवानी संहिता २०७४
दफा– ७० (घ) बमोजीम पुरुष र महिलाको उमेर –२० वर्ष हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
२) विवाहा गर्दा एक उमेर नपुगी विवाहा गरे निम्न बमोजीम सजायको व्यवस्था गरेको छ । उमेर नपुगी विवाहा गरे सो विवाहा लाई कसुर कायम गरि
मुलुकि अपराध संहिता २०७४ को
दफा –१७३ बमोजिम वाल विवाहा गरेको मानिने
उपदफा –१ बमोजिम विवाहा गर्ने व्यक्तिको उमेर २० वर्ष नपुगी उसैले विवाहा गराउनु वा गर्न हुदैन भनिएको छ ।
उपदफा –२ यसरी उमेर नपुगीभएको विवाहा स्वतह बदर हुने ।
(३) उमेर नपुगी विवाहा गर्नेलाई ३ बर्ष कैद ३० हजार रुपैया जरिवाना हुने ।
यदि कुनै व्यक्तिले १८ बर्ष भन्दा कम उमेर को महिलालाई मञ्जुरी लिएर करणी गरेमा पनि करणी सम्बन्धी कसुर हुने व्यवस्था यस मुलुकि अपराध संहिता २०७४को दफा २१९ मा गरिएको छ । यो दफा बमोजिम १८ वर्ष कम उमेरको महिला लाई कुनै तरहले मञ्जुरी लिएर करणी गरेमा पनि जवरजस्ती करणी गरेको मानीने भनी दफा २१९ को ( ३) नंं. मा त्यस्तो जवरजस्ती करणी गर्ने लाई निम्न बमोजिम सजाय को व्यवस्था गरेको छ ।
क) १० बर्ष भन्दा कम उमेरको वालीका भए १६ बर्ष देखि २० बर्ष सम्म कैद ।
ख) १० बर्ष देखि १४ बर्षको भए १४ बर्ष देखि १६ बर्ष कैद ।
ग) १४ बर्ष देखि माथी १६ बर्ष सम्मको लाई ज.ज. करणी गरेमा १२ बर्ष देखि १४ बर्ष कैद ।
घ) १६ बर्ष देखि १८ बर्षको लाई १० बर्ष देखि १२ बर्ष सम्म कैद ।
ङ) १८ बर्ष भन्दा माथिको भए ७ बर्ष देखि १० बर्ष कैद सजाय ।
दफा – २२८ बमोजिम पिडीतले पिडकबाट मुनासीव क्षतिपूर्ति पाउने वयवस्था गरेको छ ।
विवाहाको सम्बन्धमा थाहा पाएको मितिले ३ महिना भित्र उजुर गर्नु पर्ने ।
जबरजस्ती करणीको हकमा दफा – २२९ बमोजिम कसुर भएको मितिले १ बर्ष थाहा भएको मितिले ३ महिना भित्र उजुरी गर्नु पर्ने ।